Inona no hitranga raha mividy Telegram | i Google Vaovao momba ny gadget
Inona no hitranga raha mividy Telegram i Google
Tao anatin'izay andro vitsy lasa izay dia fantatsika, araka ny fampitam-baovao isan-karazany izay tsy nanolotra porofo kely dia kely momba izany, izany ny lohan'ny Google sy Telergram dia nihaona tamin'ny fotoana iray farafaharatsiny mba hiresaka momba ny fividianana ny fampiharana fandefasana hafatra eo noho eoavy amin'ilay goavambe fikarohana. Tsy fantatra ny toerana nitrangan'io fivoriana io, fa i Pavel Durov dia teo amin'ny ilan'ny latabatra ary Sundar Pichay teo an-daniny.
Tsy misy isalasalana fa tsy nahomby i Google tamin'ny fiezahany hanana tambajotra sosialy misy ifandraisany na fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo afaka mifaninana amin'ny WhatsApp na Telegram mihitsy. Google Plus sy Hangouts dia tsy nanana ny fahombiazana nandrasana ary izany no antony nanapahan'i Google hevitra ny haka ilay boky fanamarinana hanatsarana ny sehatry ny fiaraha-monina miaraka amin'ireo fampiharana toa ilay noforonin'i Durov, lehiben'ny tetikasa Telegram.
Araka ny tarehimarika tsy ofisialy, Google dia vonona ny hametraka eo ambonin'ny latabatra vola 1.000 tapitrisa dolara hahazoana Telegram. Na izany aza, toa toa tsy ampy ho an'ireo tompon'andraikitra amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra mailaka ity tolotra ity, izay tsy nanda ny tolotra fotsiny, fa koa nandà ny fifandraisana amin'i Google amin'ny alàlan'ny Twitter.
1 Google + Telegram, ny fitambarana tonga lafatra
2 Mandà izany i Telegram ary mangina i Google
3 Tokony hanomboka ahiahy ny Facebook sy ny WhatsApp
4 Google dia hanambara ny fividianana Telegram tsy ho ela
Google + Telegram, ny fitambarana tonga lafatra
Telegram dia iray amin'ireo serivisy fandefasan-kafatra mailaka tena sarobidy amin'ireo mpampiasa, eny fa na dia alohan'ny WhatsApp mahery aza. Ny tsiambaratelo atolony, ny safidy marobe ananany na ny kinova birao tsara dia sasany amin'ny lafin-javatra izay tian'ny mpampiasa an-tapitrisany.
Ny fividianana ny serivisy Google dia mety hanosika azy hanakaiky ny WhatsApp eo amin'ny isan'ny mpampiasa ary lasa safidy mavesatra ho an'ny WhatsApp.
Hatramin'ny androany, ary araka ny hitanao amin'ity tabilao manaraka ity, ny Telegram dia lavitra an'ireo mpampiasa mavitrika 1.000 tapitrisa isam-bolana ary mila manorim-ponenana hatramin'ny mahatratra 100 tapitrisa ireo mpampiasa. Ny ankamaroan'ireo rindranasa manjaka amin'ity tsena ity dia an'ny Facebook ary mazava ho azy fa tsy misy soritry ny rindranasa Google.
Ny totalin'ny Google sy Telegram dia mety hanome fiainana vaovao ho an'ny fampiharana fandefasan-kafatra eo no ho eo, na dia azo atao aza ny manangona any ambadiky ny lafiny sasany.
Mandà izany i Telegram ary mangina i Google
Ny vaovao mikasika ny fifampiraharahana amin'ny Google momba ny fividianana Telegram dia milaza fa Durov sy Pichay dia nihaona tokony ho herintaona lasa izay tany amin'ny toerana iray tamin'ny fotoana tsy fantatra. Araka ny efa nomarihinay, nolavin'i Telegram fihaonana toy izany ary mangina i Google mandritra ny fotoana fohy, izay mampiahiahy izaitsizy tokoa.
Amin'ny ankabeazan'ny fotoana ary rehefa mitranga ireo karazam-pivoriana ireo dia tsy misy olona na saika tsy misy mahalala momba azy io, ary hafahafa fa tamin'ity tranga ity dia nanjary mazava. Nolavin'i Telegram izany, heveriko fa tsy misy dikany velively izany, ary ny zavatra lojika, ho an'ny orinasa amin'ny toe-javatra misy azy dia tokony handà azy. Ny hita mazava dia hoe, hoy ny ohabolana, rehefa maneno ny ony dia mitondra rano.
Ary amin'ity tranga manokana ity fa milamina ny rano, dia zavatra iray hafa ny mahita ny toerana ahatongavan'io renirano io. Mila manao zavatra amin'ny faritra sasany i Google, ary iray amin'izany ny fandefasana hafatra eo noho eo. Miaraka amin'ny Hangouts dia mazava ho resy ny ady ary tsy mbola nanohana ny mpampiasa azy ny serivisy ary isaina ny isa mbola mampiasa azy. Telegram ho an'ny anjarany dia nitombo, fa tsy amin'ny ambaratonga izay angamba nantenaintsika rehetra. Mba hahatratrarana WhatsApp dia mila fanohanana lehibe toa ny goavambe fikarohana izy na dia mety hamoy ny sasany amin'ireo lafin-javatra tena ilaina aza ho setrin'izany.
Tokony hanomboka ahiahy ny Facebook sy ny WhatsApp
Nandritra ny fotoana fohy dia nanana WhatsApp ny tambajotra sosialy Facebook, izay nandoavany vola 1.000 tapitrisa dolara, zavatra mitovy amin'ny natolotry ny Google ho an'ny Telegram. Araka ny fampahalalana isan-karazany, ilay goavam-pikarohana, boky fanaraha-maso, dia te-hividy iray amin'ireo fampiharana fandefasan-kafatra mailaka malaza indrindra amin'izao fotoana izao ary izay tompon'andraikitra amin'ny WhatsApp dia tokony hanomboka hanahy. Ary io Telegram io, tsy nisy fanampian'ny olon-drehetra, dia nahavita nitombo tamin'ny ambaratonga lehibe, manome endrika mahaliana izay ankafizin'ny mpampiasa tokoa.
Raha ny Google no mividy, dia mety hitombo ny telegram, noho ny haino aman-jery Google, noho ny fiantraikany amin'ny mpampiasa maro na ohatra, noho ny fampidirana ilay fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo amin'ny Android rehetra. Afaka fotoana fohy dia mety hahatratra ny WhatsApp izany ary handany azy aza, satria aleo tsy adino ny fiarovana sy ny safidy natolotry Telegram antsika, tsy ho hitanao ao amin'ny WhatsApp izany.
Google dia hanambara ny fividianana Telegram tsy ho ela
Diso angamba aho, saingy satria nazava ny vaovao fa liana amin'ny hividy Telegram i Google Matoky aho fa hambara amin'ny fomba ofisialy ny fividianana. Ny fitsangatsanganana eo amin'ny tsenan'ny Telegram dia hifarana, ary ny fitomboany eo amin'ny isan'ny mpampiasa dia mihakely kokoa. Raha i Google no mandray ny serivisy fandefasan-kafatra eo noho eo, dia afaka nifandimby ny zava-drehetra, ary ny orinasa mitantana an'i Sundar Pichay dia manana zavatra roa sisa tavela, ny vola sy ny fitaovana hampiakarana ny serivisy fandefasan-kafatra eo an-tampon'ny WhatsApp.
Efa nandre ny fifandraisana voalohany teo amin'ny Telegram sy Google isika, ary na eo aza ny fahanginana sy ny fandavana, tsy ho ela dia hanana vaovao vaovao isika, angamba tolotra ara-toekarena vaovao na fepetra apetraky ny Telegram amin'ny Google, saingy matahotra mafy aho fa Ity no tsy tapitra satria "noana" ilay goavambe fikarohana ary ambonin'izany rehetra izany dia mila manana ny toerany amin'ny tsena ifotony.
Mihevitra ve ianao fa hiafara amin'ny fividianan'ny Telegram Google na ho ela na ho haingana, na ny mifanohitra amin'izay aza, ny serivisy fandefasan-kafatra eo no eo dia hiasa tsy miankina?. Omeo anay ny hevitrao momba ilay raharaha eo amin'ny toerana natokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy izay misy anay ary maniry mafy ny hiady hevitra aminao izahay, momba an'io lohahevitra io na amin'ny zavatra hafa izay ifampiraharahanay isan'andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Inona no hitranga raha mividy Telegram i Google
TomTom dia manolotra sarintany mandritra ny androm-piainany maimaim-poana ao amin'ny faritra Start
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao mba hanatanterahana ny fahaizan'ny telefaona mahomby